सम्झना, संस्मरण, अतितको याद जे भने पनि आखिर बितेका समयका भोगाइहरु आँखामा झ्ल्झली हुनु, मानसपटलमा ती घट्नाहरु बिझिरहनु हो। ती सम्झनाहरुका भोगाइहरु बिभिन्न किसिमका हुन्छन। कुनै खुशी र उन्माद ल्याउने, कुनै मुटुभित्र बिझिरहने, कुनै संस्मरण गर्नसाथ मनै कुंडिदिने जस्ता हुन्छन। यस्तै संस्मरण मध्य म यहाँ एकजना ब्यक्तित्वसँगको मेरो भेट, वहाँसँग मैले बिताएका दिनचर्याहरु र वहाँसँग अनायस बिछोडिनु परेको पलका तीता भोगाइहरु बाँड्न चाहन्छु।
हुन त मलाई राम्रोसँग मिती र दिन त थाहा छैन, तापनि मलाई लाग्छ यस्तै ५६/५७ सालतिरको कुरो हो। म काठमाणडौ गीत रेकोर्डिङको सिलसिलामा आएकी थिएँ। त्यस समय म मेरी दिदिको घर लगनखेलमा बसेकी थिए। एक दिन एकजना गायक भाइ (भिम राइ) मलाई भेट्न भनी आए। आफ्नो क्षेत्र पनि गीत-सङीत भएकोले त्यही बिषयमा हाम्रो कुराकानी भयो। अन्त्यमा उस्ले मलाई आर्मी हेड क्वाटर जाउँ भनेर जिद्दी गर्न थाल्यो। मैले '”किन जानु म आर्मी हेड क्वाटर? म जान्न” भन्दा उस्ले मलाई भन्यो “दिदी तपाईं पनि गीतकार भएकोले म तपाईंलाई गीतकार आनन्द अधिकारिसँग भेट गराइदिन्छु। तपाईंहरु उस्तै उस्तै भावना पनि मिल्ने, कुरा पनि मिल्ने” भन्न थाल्यो। त्यो समयमा गीतकार आनन्दका गीतहरु “हीरा काट्ने हिरैमा राखेर”, “ओराली लागेको हरिणको चाल भो” जस्ता हिट थिए। मलाई अप्ठ्यारो महसुश भयो। त्यस्तो हिट गीत लेख्ने त्यही पनि आर्मीको मेजर जस्ता सँग मैले कसरी भेट गर्ने!, मलाई धेरै अप्ठ्यारो महसुश भैरहेको थियो ता पनि मैले भेट्न जाने सोंच बनाए।
दिदी त्यसइ क्रममा गोकुल भाईलाई ठमेलमा भेटेको कुर पनि बिर्सनु भयो ??
bhai,ti sabai samayka samjhanaaharu bistaarai aaudaichhan.kaha yatti maatra ho ra?lekhna baakina nai chhan ni bhaiko pasal khojda karnala
sahab ra ma haraayeko thamelma.